Wararka Maanta: Arbaco, Mar 7 , 2018-Maxey isku qabteen Wasiir Xoosh iyo guddiga la socodka Dastuurka
Arbaco, Maarso, 07, 2018 (HOL) – Waxaa dibeda u soo baxaya khilaaf xoog leh oo soo kala dhaxgalay guddiga la socodka dib-u-eegista dastuurka ee labada Aqal iyo Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil.
Guddiga ayaa qoraal ay soo saareen waxaa ay ku dalbadeen in kalsoonida lagala noqdo Wasiirka oo ay ku eedeeyeen in uu wadi waayay howlihii loo idmaday.
Haddaba Xusseen Sheekh Maxuud oo ka tirsan Guddiga Dastuurka ee Aqalka Sare ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa ay eedeyntoodu ku qotonto, isaga oo sheegay in Wasiirku uusan aheyn sida uu hadalka u dhigay shaqsi lagu aami karo ama wadi kara howlaha dhameystirka Dastuurka.
‘’Waxaa leysku fahmi la’yahay geedi socodkii dib-u-eegista dastuurka, dafiraad lagu sameynayo qodobada 133 iyo 134 ee dastuurka oo cadeynaya qaabka iyo habka loo marayo dib-u-eegista dastuurka cida shaqada iska leh, intaas oo dhanna waa uu inkirsan yahay howshiisa ayaana laga dareemayaa, markii hore waad ogeedeen waxaa uu la dagaalay guddigii madaxa-bannaanaa oo uu yiri waa in meesha laga saaraa waan ka diidnay oo baarlamaanka ayaa diiday, hadana waxaa uu isku dayay in labada guddiba uu ragaadiyo taana waa laga diiday oo madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha ayaa arinka soo dhaxgalay, markii danbe oo arrimaha oo dhan laga heshiiyay waxyaabihii lagu heshiiyay waa uu fulin waayay, Miisaaniyadii uu baarlamaanku ansixiyay ayuu xitaa sharci darro ku tilmaamay, sidaa daraadeed bulshada Soomaaliyeed waxaan rabnaa in ay aragto in qofka noocaas ah aan lagu aamini karin dhameystirka howlaha dastuurka’’ ayuu yiri Xusseen Sheekh Maxamuud.
Guud ahaan wasaaradda Dastuurka ayuu ku tilmaamay in ay noqotay mid fadhiid ah, isaga oo intaa ku darray in ay tahay in Wasiirku meeshu ka baxo.
Khilaafka u dhaxeeyay guddiga dastuurka iyo sidoo kale wasaaradda ayuu sheegay Xildhibaanka in ay galeen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaare laakiin ay ku fashilmeen in ay xaliyaan.